जनता विश्वस्त हुने नेतृत्वको सख्त अभाव - Sankalpa Khabar
4. सेनाका डा.भुवनराज कुँवरले लगाए कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप
5. बझाङमा तरुण दलका कार्यकर्ता सिंहको हत्या गर्नेलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग
6. नेपालमा सुरु भो खोप लगाउन, पहिलो खोप डा. सागर राजभण्डारीले लगाए
जनता विश्वस्त हुने नेतृत्वको सख्त अभाव
२५ पुष १९:३४
चमत्कार गरेर देखाउने सपना बाँड्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कचिङ्गलका कारण देशको राजनीतिक भविष्य अन्यौलपूर्ण र अन्धकारोन्मुख भएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा भएको छ । तर संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । संविधानले नदिएको कार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषित मितिमा निर्वाचन गराउँछन भन्ने विश्वास पनि आम मानिसलाई छैन । यो अवस्थामा नेपालको राजनिितक भविष्य कस्तो हुने भन्ने आम चिन्ता थपिएको छ ।
अमेरिकाको संसदमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचित भएको प्रमाणिकरण कार्यक्रममा बहालवाला राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकले निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दा प्रमाणिकरण कार्यक्रम विथोल्न खोजेको घटनाले विश्वको लोकतान्त्रिकरणको इतिहासलाई झस्काएको छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाज भनिएको अमेरिकामा ट्रम्प निर्वाचित भएपछिका घटनाहरु अनेपक्षित भएका छन् । यसले सिंगो प्रजातान्त्रिक संस्कृतिलार्य चुनौति दिएको छ । विम्व रंगमञ्चमा देखिने यस्ता दुखान्त घटना र हिंसाको राजनीतिले नेपालको घटनालाई समेत प्रभावित बनाएको छ ।
शासकहरुको सनकी र दम्भी स्वभावले सोचले देशको परिचय धरापमा पार्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा उल्लेखित घटनालाई लिन सकिन्छ । नेकपाले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्न नसक्दा नेपाल असजिलो अवस्थामा आउनु, निर्वाचन हुन नसक्ने आकलन गरिनु, सबै भारी न्यायपालिकालाई बोकाउन खोज्नु, न्यायापालिकामा पनि अनुकुलका न्यायाधीशहरुको इजलास गठनको माग र अपेक्षा राख्नु जस्ता घटनाले सकरात्मक संकेत गरेको छैन । असंवैधानिक कदम न्यायपालिकाबाट सच्चिन्छ भन्ने विश्वास पनि नहुनु र प्रधानमन्त्रीको जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जाने घोषणाप्रति पनि अविश्वास प्रकट हुनु सुखद्, सकरात्मक र विश्वसनीय अवस्था होइन ।
भुइँतलको मानिस नआई आन्दोलनमाथि उठ्नै सक्दैन । त्यो वर्गलाई यी देखिएका अनुहारमाथि भरोसा नै छैन
यसबीचमा के के भए, कतिसम्मका आश्वासनहरु बाँडिए त्यसको लेखाजोखा नै राख्न सकिँदैन । जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको हालत के छ ? त्यो केलाउने फुर्सद नै छैन । नेकपाका सदसयहरु जनताको बीचमा के भनेर जान्छन् भन्ने आम जिज्ञासा छ । त्योभन्दा ठूलो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्य के हुने भन्ने छ । यसप्रति कोही गम्भीर बन्न नसकेको बुझाई आम मानिसको रहेको छ । आफूहरुले विश्वासीलाई र भरपर्दो अभिभावक नपाएको महसुस आम जनताले गरेका छन् । जनताको इच्छा, चाहना र भाविनाको प्रतिनिधित्व नेपाली इतिहासमा विरलै भएको छ ।
जनताको अपार समर्थन र विश्वासमाथि पटक पटक कुठाराघात भएको छ । यसले कुनै पनि दलप्रति विश्वास हुन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन– नेपाली जनता । दलहरुमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरुमा पनि इमान्दारहरुलाई पाखा लगाउने, भ्रष्ट, दलाल, माफिया, ठेकेदार र हप्ता उठाउने डनहरु प्रोत्साहित गर्ने, बिहान बेलुका पदाधिकारीहरुको घर कोठा धाउने, चाकरी र चाप्लुसीमा रमाउने नेतृत्वका कारण भोलिको नेतृत्व पनि देशको आवश्यकता र जनताको चाहना सम्वोधन गर्न सक्ने आउँछ भन्ने देखिदैछ । यिनै देखिएका मध्य केही प्रक्रियाबाट आउँछन् भन्दा मानिस नाक खुम्च्याउँछन् । पटक पटक परीक्षणबाट असफल र अयोग्य प्रमाणित भएका, भ्रष्ट प्रवृत्तिका मानिसहरुको आगमनबाट उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । त्यही समस्याले गर्दा सडकमा गरिएको आमन्त्रणमा जनताको सहभागिता छैन । भुइँतलको मानिस नआई आन्दोलनमाथि उठ्नै सक्दैन । त्यो वर्गलाई यी देखिएका अनुहारमाथि भरोसा नै छैन ।
आजसम्म झगडामा नै समय व्यतित भयो, अब गर्दैनौं भन्ने वा अरु केही नीति र कार्यक्रम छ ? जनता खोक्रो भाषण र आश्वासनमा विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन्
नेता भनाउँदाहरुलाई आफूमाथि विश्वास नै छैन । भारत र चीन, अमेरिकी र युरोपियनहरुको नेपालको के स्वार्थ छ ? उनीहरु कस्तो व्यवस्थापन गर्न चाहान्छन् र त्यसमा भोलिको नेपालको मार्गचित्र बन्छ भन्ने आकलन गर्दै बसेका छन् । बिग्रिएको अवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने किसिमको सोच विचार, चिन्तन र छलफल नै छैन । आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वसँग के अपेक्षा राख्ने ? जनतालाई सम्वोधन गर्नसक्ने, जनतासँग जोडिने राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा यस किसिमको अन्योल देखिनु अस्वभाविक होइन ।
नेकपाका नेताहरु एक आपसमा तल्लोस्तरमा ओर्लिएर आरोप प्रत्यारोप माग गरिरहेका छैनन्, बाँझाबाझ नै गरिरहेका छन् । कुनै सिद्धान्त, विचार, नीति वा कार्यक्रमको विवाद नभएर पद र प्रतिष्ठा अनि भागवण्डा नलिमेर लफडा भएको स्पष्ट हुन्छ । दुवै पक्षका व्यक्तिहरुको मुखाले र आत्मकेन्द्रित अभिव्यक्तिले यिनीहरु देशको नेतृत्व गर्न लायक नै देखिँदैनन् । व्यक्तिगत झगडा र हिसाब किताब गरेर समय खर्चिएका छन् । समस्यालाई जटिल बनाएका छन् । देशको राजनीतिलाई फोहोरी बनाएका छन् अनि जनताका बीचमा सझाइएका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । नेकपाको मठाधीशहरुका बीचको हिलो छ्यापाछा्यापले सिंगो राजनीति र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउने कार्य भएको छ ।
नेपालीहरुको स्मृति छोटो छ, आन्दोलन प्रतिगमन जस्ता शब्दहरुको प्रयोगबाट मन जित्न सक्छौं भन्ने भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ
यस्तो कम्युनिष्ट चरित्रले गर्दा एकातिर राजनीति बद्नाम भएको छ भने अर्कोतिर विचार र आदर्श विकृति बनेको छ । यसलाई सच्चाउने सामथ्र्य र क्षमता भएको राजनीतिक नेतृत्व देखिएको छैन । विश्वस्त हुने राजनीतिक नेतृत्व भएको भए संसद विघटन नै हुने थिएन । विघटन नै भएको अवस्थामा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो आदेश वा फैसला आउँला भन्ने अन्यौल र अनिश्चियको कालो बादलमा राजनीति रुमलिएको हुने थिएन ।
ओली–दाहाल शक्ति केन्द्र मिलाउन क्रियाशील देखिन्छन् । प्राथमिकतामा सत्ता र स्वार्थ नै छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलाएर पचास वर्ष शासन गछौं भन्ने ओली र दाहालका विगतका अभिव्यक्ति आजको दिन सुन्न लायक भएका छन् । जनतालाई सस्तो लोकप्रियताका गुलिया आश्वासन दिएर जनमत बटुलेका ओली–दाहाल अब कसरी जनताको बीचमा जान्छन् ? के मुद्दा लिएर जाने ? आजसम्म झगडामा नै समय व्यतित भयो, अब गर्दैनौं भन्ने वा अरु केही नीति र कार्यक्रम छ ? जनता खोक्रो भाषण र आश्वासनमा विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् ।
धेरैपटक धोखा भयो, अब विचार पु-याउनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भएको छ । नेपालीहरुको स्मृति छोटो छ, आन्दोलन प्रतिगमन जस्ता शब्दहरुको प्रयोगबाट मन जित्न सक्छौं भन्ने भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ । स्पष्ट विचार, नीति र कार्यक्रम बिना विश्वास गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन । भ्रष्ट, दलाल, विचौलिया, लुटेराहरु लिएर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सबै दल र यसको नेतृत्व मुक्त हुनसक्नुपर्छ । दलमा भएको कम खराब व्यक्तिहरुलाई उचित स्थान दिँदै, त्याग तपस्या र योगदान अनि योग्यता र क्षमताको कदर भएको अनुभूति गराउन नसकेसम्म अवस्थामा फरक पन आउँदैन, व्यवस्थामा आए पनि ।
भारतले दिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन आइपुग्यो नेपाल
८ माघ १२:४४
ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने माधव-प्रचण्ड समूहकाे तयारी
११ माघ ०८:४६
११ माघ ०७:५२
गौतमको तागतले जुट्ला त नेकपा ?
१५ माघ ०७:२०
थप २ सय ३२ मा कोरोना संक्रमण, शनिबार ८…
१० माघ १६:४३
पहिरो मर्मत नगरी चुनावमा जाँदा दुर्घटना : बाबुराम भट्टराई
११ माघ ११:४९